Namoaka rakibolana antserasera amin’ny fiteny indizeny 21 ny fanjakana indiana ao Odisha · Global Voices teny Malagasy
Navoaka eo ambany lisansa Creative Commons ireo rakibolana telo fiteny
Voadika ny 22 Oktobra 2019 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, English, Français, English
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Akademia Odisha Virtoaly.
Tamin'ny taona 2018 ny governemanta amin'ny fanjakana Indiana ao Odisha namoaka rakibolana 21 isa ao amin'ny fitenim-paritany indizeny miisa 21 ao amin'ity fanjakana ity. Narafitra ireo rakibolana ireo tamin'ny fiarahana tamin'ireo vondrom-piarahamonina mpiteny azy ao anatin'ny fikasana hametraka fandaharam-pianarana marofiteny ho an'ny fanabeazana fototra. Navoaka tamin'ny aogositra 2019 ireo rakibolana fiteny telo ahitana ny fiteny indizeny mankany amin'ny ffiteny anglisy sy Odia (fiteny ofisialin'i Odisha) mba ho ampiasaim-bahoaka ao amin'ny vavahadin-tseraseram-panabeazana iray tantanin'ny governemanta.
Tamin'ny 17 Oktobra, nametrahan'ny vavahadin-tserasera ara-panabeazana Akademia Odisha Virtoaly lisansa antserasera daholo indray ireo rakibolana rehetra ireo araka ny lisansa Creative Commons Attribution 4.0 International.
Fandaharana faha-8 amin'ny Lalampanorenana Indiana
Ny Eighth Schedule ao amin'ny Lalampanorenana Indiana no manolotra ny fototry ny fampiasana vondrona fiteny indiana miisa 22 eo amin'ny fampiroboroboana ny fitantanana, fanabeazana ary ny kolontsaina. Omeny ihany koa ny torolalana amin'ny fanadinana amin'ny asam-panjakana mba hotarihana amin'ireo fiteny nampiandrasina ireo. Ireto avy ireo fitany amin'ny lisitra amin'izao fotoana: Assamey, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Meitei, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu ary Urdu. Manampy ny faritany hankatoa ireo fiteny ireo izay resahina ao an-toerana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fitantanam-panjakana ihany koa raha tafiditra ao anatin'io lisitra io. Mbola misy ny fangatahana ampidirana fiteny 38 hafa mba ho ao anaty lisitra.
Mahafaly anay ny fampiasan'ny governemanta lisansa CC mba hifampizara fahalalàna.
Vao nametraka lisansa amin'ny rakibolana miisa 21 izao ny fanjakana indiana ao Odisha, izany hoe amin'ny fiteny indizeny miisa 21 ifampiresahana ao amin'ny faritany, araka ny CC-BY 4.0.
Azo trohina daholo ireo ato
Tsy vao sambany ny governemantan'i Odisha no namela ny loharanom-baovaony hozaraka araka ny lisansa Creative Commons. Efa nivoaka lohatenin-gazety ny governemantan'i Odisha tamin'ny taona 2017, ho governemantam-panjakana indiana voalohany namadika ny lisansa amin'ny media sosialin-dry zareo ho lisansa famelana malalaka. Ahazoana alalana avy amin'izany ny fampiasana votoaty amin'ny sehatra misokatra ara-lisansa toa ny Wikipedia sy ireo tetikasa miaraka aminy tahaka ny Wikimedia Commons (tranomboky marolafy), Wikisource (tranomboky maimaimpoana an-tserasera) ary Wiktionary (rakibolana maimaimpoana an-tserasera). Any ho any, nanangana fitaovana ahafahana manamora famindrana sary misokatra lisansa avy amin'ireo sary nahazo lisansa indray tao amin'ny media sosialy ho any amin'ny Wikimedia Commons i Jnanaranjan Sahu, Wikimediana iray avy ao amin'ny OWUG, mba ho azo ampiasaina ao amin'ny Wikipedia ireny sary ireny.
Subhashish Panigrahi avy ao amin'ny Rising Voices no niantsafa tamin'i Ranjana Chopra izay mitarika ny Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development, Minorities and Backward Classes Welfare Department avy ao amin'ny governemantan'i Odisha mba hamantarana bebe kokoa momba ity tetikasa ity.
Mba ahitana taratra bebe kokoa ny tokotanintsehatra nandrafetana ireo rakibolana ireo, zarain'i Chopra hoe tamin'ny fomba ahoana ny filàna fananana rakibolana tompotany teniroa mba hanolorana fanabeazana marofiteny no hery nitarika nahavitàna izao asa izao. Koa satria moa misy fiteny tompotany miisa 21 miavaka tsara itenenana ao amin'ilay fanjakana ary mila mahay tsara fiteny anankitelo ireo mpiasa eny anivon'ny fiarahamonina, dia niatrika sakana goavana maro ry zareo noho ny tsy fisian'ny fitaovana (rakibolana) tahaka ireny. Anisany amin'ireo rafi-pikambanana tafiditra ho mandray anjara fanangonana ny Academy of Tribal Languages and Culture (ATLC na ny Akademian'ny Kolontsaina sy Fitenim-poko), Ivotoeram-Panazarana sy Fikarohana momba ireo Ambaratongan-tsaranga mbola miandry sy foko mbola miandry (SCSTRTI) ary ny Vaomieran'ny Fampandrosoana Manokana (SDC) — andrim-panjakana ao amin'ny governemanta avokoa izy rehetra ireo. Mbola mitoetra ho foibe fakana fitoavana ho an'ny mpitsidika hianatra ny vahoaka tompotany ao Odisha sy ny fiteniny sy ny kolontsainy ihany ny Mozean'ny Zavakanto sy ny zavatra ara-poko ao amin'ny renivohitr'i Odisha ao Bhubaneswar.
Rising Voices (RV): Maro amin'ireo fiteny no tsy mbola ampy rakitra. Ahoana ny fomba niarahanareo niasa tamin'ny vondrom-piarahamonina mpiteny izany ho fanangonana sy fanambàrana ny voambolana? Ahoana ny fomba nanampian'ny rakibolana efa nisy tao amin'izany fizotra izany?
Ranjana Chopra (RC): Zavamisy izany fiteny tompotany mbola tsy ampy rakitra izany ao amin'ny fanjakana [Odisha] na dia efa nisy aza ireo fiezahana nitranga tsindraindray tao anatin'ny taona maro. Feno karazam-pitenim-paritra ny fiteny vazimba. Na izany aza, na dia eo aza ireny karazam-pitenim-paritra ireny, misy ireo faritra ‘bitika’ izay amantarana/itenenana ny “fiteny fototra”, na dia somary ahitana fifangaroana aza. Nandritra ny fikarakarana ireo rakibolana teniroa sy tenitelo, nasaina ireo olona fakan-kevitra avy amin'ireo faritra bitika ireo hiasa amin'ny lahatsoratra ao anatin'ny fotoana voarafitra sy voarindra tsara tsy mitarazoka. Nofantarina tamin'ny alalan'ny fanaovana atrikasan'ireo fiteny tany amin'ireo toerana itenenana ny fiteny tsirairay avy ny olona nisongadina ho fakan-kevitra. .
RV: Misy ireo fiteny, tahaka ny Bonda (Remosam), izay ifampiresahan'olona vitsy tsy misy afa-tsy 8.000 monja. Monina any amin'ny faritra lavitra fifamoivoizana ny atsasaky ny vondrom-piarahamonina Bonda. Ahoana ny hanomananareo fanabeazana marofiteny amin'ny fitenin-dry zareo amin'ny ankapobeny, manokana, ary ahoana ny ataonareo mba hahazoan-dry zareo boky vonona ho azy ireny?
Araka ny efa voalaza teo ihany, ny lahatsoratra efa nomanina momba ny fiteny vazimba dia natao hanamafisana ny fidirana an-tsehatra amin'ny fanabeazana marofiteny mandeha amin'izao fotoana izao ary tafiditra amin'izany ihany koa ny asa toy izany amin'ny fiteny Bonda. Heverina hanamora ny fanabeazana ara-panjakana amin'ny fitenin-dry zareo ireo mpampianatra fiteny nanolotena avy amin'ny vondrom-piarahamonina miteny ilay fiteny. Ireo lahatsoratra amin'ny fiteny (rakibolana fiteny roa sy fiteny telo) no hanampy azy ireo amin'ny famoahana izay notinaky.
Koa satria miandraikitra amin'ny fananganana ireny rakibolana (fiteny roa) sy fiteny telo ireny ny Akademian'ny Fiteny sy ny Kolontsaim-Poko, dia efa nizara ny kopian'ireny fitaovana ireny amin'ny manampahefana mifandraika amin'izany io Akademia io ary mametraka (ny kopia) any amin'ireo izoran'ny asam-pananganana isankarazany ireo. Misy ihany koa ny kopia omena ireo mpampianatra ny fiteny teratany sy ireo mpiasa lohalaharana any amin'ireo departemanta mifandraika amin'izany, ary tafiditra ao ny Accredited Social Health Activist (ASHA) izay miasa amin'ny fanairana ny olompirenena ho amin'ny fandrindrana ara-pahasalamana sy mampiasa ireo servisim-pahasalamana misy amin'izao fotoana. Tafiditra amin'izany ihany koa ny Anganwadi Workers izay manabe ny olona miaina faritra ambanivohitra ny momba ny fanabeazana ara-pahasalamana ka tafiditra amin'izany ny (fanakanana tsy iforonan-jaza) sy ny (fanjarian-tsakafo), tanterahan-dry zareo ihany koa ny fanabeazana mialoha ny fandehanana an-tsekoly.
Nifampiresaka tamin'ny mpanoratra ihany koa i Manoj Kumar Mishra, sekreteran'ny governemantan'i Odisha ao amin'ny departemantan'ny Elekitronika sy ny Teknolojian'ny famoaham-baovao momba ny kinasan-dry zareo hahatonga ny loharanom-pitaovana ho vonona amin'ny endrika Unicode. Araka ny Wikipedia, ny “Unicode no fenitra amin'ny fampiasana solosaina izay nampiasaina ho amin'ny fanaovana kaody, fanehoana endrika ary fandraisana an-tanana lahatsoratra any amin'ny ankamaroan'ny rafi-panoratana misy eto amin'izao tontolo izao.” Talohan'ny nivononan'ny Unicode, soratra maro, indrindra fa ny ao India, nonampiasa fenitra kaody nolovaina izay mahatonga ny fitadiavana amin'ny aterineto ho tsy azo atao nefa mora ny mahita izany amin'ireo lahatsoratra natao amin'ny endrika Unicode sy mizara ny lahatsoratra manerantany.
RC: Araka izay mety efa ho voamarikao, azo vakiana ny votoaty ao amin'ny rakibolana fa tsy mbola azo karohina. Efa misy ve ny drafitra mba amoahana azy ireny amin'ny endrika Unicode mba ho afa-mahita azy avokoa ny manerantany, tsy ijerena fitaovana na rafi-pikirakirana?
Efa niroso izahay ny hitondra ny loharanom-pitaovana rehetra ho vonona amin'ny endrika Unicode ao amin'ireo tranonkalan'ny governemanta [-n'i Odisha] rehetra, mba hahatonga ny votoaty ho azo tadiavina amin'ny tranonkala ary hahatratra ny olompirenena tsirairay ao amin'ny fanjakana, na aiza izy no monina na aiza. Amin'izao fotoana izao izahay eo am-piasana amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ilaina mba hahatonga ny lahatsoratra sy ny endritsoratra Odia ho mety ary azo vakiana amin'ny fitaovana isankarazany. Ao anatin'ny volana maromaro hoavy, hiasa izahay hitondra ny rakibolana ho azo karohina amin'ny aterineto. Efa misavasava lalana ihany koa izahay hanampy dosie amin'ny Wikisource Odia, ka ao no hamadihan'ny vondrom-piarahamonina miasa amin'izany ny dosie ho amin'ny endrika Unicode, ary dia ho azo karohina ho azy ao amin'ny tranonkala ary avy amin'izany izy mba azon'ny rehetra jerena ny harena nolovainay voasoratra.
Tena ilain'ny mpikaroka momba ny teny sy ny ethnografy indrindra ny rakibolana mba hampivelarana ny fitaovana ho an'ny fiteny tsy mbola manana endrika voasoratra. Hampiasaina koa ireny hananganana votoaty marolafy kendrena hanampy ireo taranaka mbola tanora hampiasa bebe kokoa ny fiteny. Ahitana fiteny mihoatra ny 780 eto India ary manakaiky ny 220-250 eo ny fiteny maty tao anatin'ny 50 taona farany.